आज देशका धेरै ठाउँमा घाम लाग्ने ! - Sudur Khabar
आज देशका धेरै ठाउँमा घाम लाग्ने !
काठमाडौं, साउन २४ । उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा आज घाम लाग्ने मौसमविद्को अनुमान छ । तर दिउँसोपछि देशभरी कै मौसम एकैछिन घाम लाग्दै फेरि बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । केही ठाउँमा पानी पनि पर्ने सम्भावना छ ।
महाशाखाकी मौसमविद् मन्जु बासीका अनुसार भोलिदेखि भने मनसुन फेरि सक्रिय हुने देखिएको छ । भोलि र पर्सि केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने संभावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भोलि दिउँसो प्रदेश १, २, ३, ४ र ५ मा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ । पानी परेपछि केही नदीमा बाढीको जोखिम समेत रहेको भन्दै सतर्क रहन बाढी पूर्वानुमान शाखाले आग्रह गरेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको चौथो एकदिवसीय क्रिकेटमा श्रीलंका विजयी
महिला पनि सम्पत्तिको हकदार बन्दै, एक वर्षमा ९२ जनाको नाममा जग्गा पास